बलिउडका आदर्श जोडी जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन् - Daily Lokmandu
Homeमनोरंजनबलिउडका आदर्श जोडी जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन्
बलिउडका आदर्श जोडी जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन्
July 31, 2018 मनोरंजन Comments Off on बलिउडका आदर्श जोडी जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन्
एजेन्सी – बलिउडमा केही स्टारहरू यस्ता छन्, जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन् । उनीहरू आफ्नी श्रीमतीलाई हरेक कार्यक्रममा लैजान छुटाउँदैनन् । यहाँसम्म कि उनीहरूका लागि श्रीमतीसँगको प्रेमबाहेक अरू कुनैे कुरा ठूला छैनन् । यस्तैमा पर्छन्, यहाँ प्रस्तुत गरिएका पाँच बलिउड स्टार, जसले श्रीमतीलाई अथाह प्रेम गर्छन् :
शाहरूख र गौरी खान
बलिउडका किङ अफ रोमान्स भनेर चिनिने अभिनेता शाहरूख खान हरेक प्रेमी/प्रेमिकाका लागि रोल मोडल हुन् । त्यति मात्र नभएर श्रीमती गौरी खानका लागि पनि उनी उस्तै प्रेमी तथा श्रीमान् हुन्, जस्तो फिल्ममा देखिन्छन् । सन् १९९१ मा विवाह गरेको यो जोडीका तीन सन्तान छन् । यो जोडीलाई पनि बलिउडको आदर्श जोडीको रूपमा लिइन्छ ।
रितेश र जेनेलिया देशमुख
फिल्म ‘तुझे मेरी कसम’मा सँगै काम गरेपछि प्रेममा बाँधिएको यो जोडीले २०१२ मा विवाह ग¥यो । उनीहरूका दुई छोरा छन् । प्रेमविवाह गरेका उनीहरू विवाहपछि पनि प्रेमलाई उस्तै कायम राख्ने जोडीमा पर्छन् । उनीहरूबीचको झगडा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । जेनेलियालाई रितेशले गर्ने प्रेमका कारण भारतीय मिडियाले उनलाई भाग्यमानी महिला भन्ने गरेका छन् ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अजय र काजोल देवगण
बलिउडमा निकै संघर्ष गरेर स्थापित भएका नायक अजय देवगणले ‘सिंघम’जस्ता सुपरहिट फिल्म दिए । उनले सन् १९९९ मा त्यस दशककी हिट अभिनेत्री काजोलसँग विवाह गरे । उनीहरूका दुई सन्तान छन् । अधिकांश कार्यक्रम तथा रिसेप्सन पार्टीमा सँगै देखिने यो जोडीलाई बलिउडमा आदर्श जोडीको रूपमा लिइन्छ ।
अक्षयकुमार र ट्विंकल
बलिउडका खेलाडी अभिनेता अक्षयकुमारले पनि श्रीमती ट्विंकल खन्नालाई अत्यधिक प्रेम गर्ने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ । अक्षयकुमार वर्षमा तीन–चारवटा फिल्म खेल्छन् ।
तर, श्रीमतीका लागि पनि उत्तिकै समय छुट्ट्याउँछन् । ‘बरसात’ फिल्मबाट चम्किएकी अभिनेत्री ट्विंकल खन्नालाई अक्षयले रिक्सामा घुमाएको तस्बिर त भाइरल नै भएको थियो ।
अभिषेक र ऐश्वर्या राय बच्चन
बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेक बच्चन फिल्ममा त त्यति जमेनन् । उनी साइड भूमिकामा भएका फिल्म मात्र सफल भए । अभिषेकले सन् १९९४ की विश्वसुन्दरी ऐश्वर्या रायसँग सन् २००७ मा विवाह गरे ।
अभिषेकले ऐश्वर्यालाई आर्थिक तथा सामाजिक महत्व जति दिनुपर्ने हो त्यति दिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । प्रायः कार्यक्रममा सँगै देखिने यी जोडी केही वर्षअघि कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा सँगै देखिएको थियो ।
किड्नी बिग्रिनुमा तपाईकै लापरवाही, यस्तो बानी छ भने अब बेलैमा त्यागौ।
विश्वकै लामो नङ भएका ८२ वर्षीय श्रीधरको कडा नङ काट्न फलाम काट्ने मेसिननै प्रयोग गरियो !
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,286)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,257)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,137)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,099)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (991)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (612)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (592)
माघे संक्राती कै दिन भयानक दुर्घटना एक सशस्त्र प्रहरी सहित घटनास्थल मै ३ जनाको मृत्यु #RIP (552)
सपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो भने कसैलाइ नसुनाउनुहोस, मालामाल हुनु हुने छ(भिडियाे) (15,149)
बिराटनगरमा बिस्फोट,एक बालकको मृत्यु,एक बालिका गम्भिर (13,754)
Wow…हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! सबैलाइ प्रेरणा मिलोस… (13,046)
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण ! निर्मलाको बुवा माथि शंका ! किन मान्दैनन् रगत दिन ? खास कारण… (10,483)
अब त तिमिलाई भेट्न पनि, अरु कसैको अनुमती चाहिन्छ मलाई…सबैले एकपटक… (9,825)